WordPress maka obere azụmahịa | Martech Zone
Satọde, Satọdee 8, 2012 Mọnde, Febụwarị 1, 2016 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-agbanye WordPress, ọ nwere ike ịba ụba maka obere azụmaahịa na-enweghị nyocha ọgbara ọhụrụ iji wepụta ụlọ ha WordPress. Nke a bu ezigbo ihe omuma nke na-ejeghari mmadu ma obu ndi otu site na ihe ha kwesiri ighota na nhazi mgbe ha na-eme atumatu ma tinye ha na saịtị WordPress. Ahụrụ m infographic a n'anya n'ihi na ọ chọrọ onye ọrụ pịa-site na microsite mmekọrịta ịhụ azịza ya.
N'uche m, enwere naanị nkwenye na-efu na nkwenye - yana nke ahụ ga-aga Premiya WordPress Bochum ọrụ dị ka Flywheel. Site na isoro nnukwu ndị ọbịa, obere azụmaahịa nwere ike ịkụtu ihe dị ka ọkara nke nsogbu ndị a na ndepụta ha, gụnyere nkwado ndabere, nchekwa, ndozi, arụmọrụ, na nkwado!
Tags: esi wordpressmwube wordpresswordpress esi
Sep 9, 2012 na 7:12 PM
OMG! Hụ nkwupụta "N'uche m" kachasị! Kedu onye n'echiche ziri ezi ha ga-atụle nke a mgbe anyị nwere azịza SaaS dị oke ọnụ ma dị ọnụ ala ugbu a? Ebe a na Tyner Pond Farm (a doro anya obere azụmahịa.) Anyị na-eji ma Compendium na Hubspot. Ọ dị mfe, enweghị atụ ma dịkwa ọnụ ala. Onweghi ebe na ihe omuma a ka m hu ihe obula gbasara nyocha ma obu ichota ROI.
Sep 9, 2012 na 9:38 PM
Ndị mmadụ na-elelị akụrụngwa ọ chọrọ iji wulite ọkachamara n'ọrụ nke WordPress. Ha na-eche na ọ “nweere onwe” ma ha jiri nwayọ chọpụta nsogbu niile ọ bụla gbasara ịhazi onwe ya, plugins, ije, nkwado ndabere na mpaghara nchekwa. Anyị hụrụ WordPress n'anya mana anyị nwere onye nrụpụta WordPress na onye mmebe na ndị ọrụ… ọ bụghị ọtụtụ azụmaahịa nwere ihe ndị ahụ!
Dee 13, 2012 na 2: 33 AM
Ekele na-akuziri m otu esi agba obere ahia. WordPress bụ n'ezie a pụrụ ịtụkwasị obi na ọ nwere nghọta infographic. Ọ bụ ihe ga-abara ọtụtụ azụmaahịa uru, ebe ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ nye ndị gị.